धेरै तृणमूल कार्यकर्ता जीटीएको कामसित असन्तुष्ट - प्रतिविम्ब.com %
दार्जीलिङ, 12 अगस्त।
जीटीए (गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन)-को कामसित धेरै तृणमूल कंग्रेस समर्थकहरू सन्तुष्ट नरहेको आज दार्जीलिङ हिल तृणमूल कंग्रेसका पर्यवेक्षक राजेन मुखियाले बताए। उनले भने-जीटीएले शिक्षक नियुक्तिमा पनि भाइ-भतिजावादको नीति अप्नाएको छ भने विकासका कार्यहरू पनि सन्तोषजनक रूपमा गरेको छैन। यसैले तृणमूल कंग्रेसले दलबलसहित जीटीएको मुख्यालय लालकोठी घेराउ गर्न नपरोस्, उनले चेताउनी दिए।
आज यहाँको जजबजारस्थित पार्टी कार्यालयमा उनले खण्ड समिति, टाउन कमिटी साथै बुथ स्तरीय कमिटीहरूका प्रतिनिधिहरूसित एक बैठक गरेका थिए। जुन बैठकमा पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरूले जीटीएको काममा असन्तुष्टि जाहेर गरेको उनले बताए। उनले भने-जीटीएले पारदर्शी ढंगमा काम गरोस्, कुनै पार्टी नछुट्याओस्। यस विषय लिएर उनले शीघ्रै जीटीए अध्यक्ष अनित थापासित भेट गरेर कुराकानी गर्ने योजना बनाएको पनि बताए। यसैबीच, उनले दार्जीलिङ पहाडमा निर्वाचित निकायहरू हुनपर्ने विषयमाथि जोड दिंदै भने-दार्जीलिङ नगरपालिका हाल प्रशासकको अधीनमा सञ्चालन भइरहेको छ भने जीटीएमा पनि मनोनित अध्यक्ष राखिएको छ। यसैले दार्जीलिङ नगरपालिकाको चुनाउ यो बर्खा समाप्त भएपछि होस् अनि जीटीएको चुनाउ अर्को वर्ष 2020-भित्र हुनपर्ने हाम्रो माग छ।
जीटीए चुनाउमा के तृणमूल कंग्रेसले विनय तामाङपन्थी गोजमुमोसित नै मिलेर भाग लिनेछ? भन्ने प्रश्‍नको मुखियाले सोझो उत्तर दिन चाहेनन्। उनले भने-अहिले पार्टीलाई दह्रिलो बनाउने अभियान शुरू भएको छ, चुनाउको समय पार्टीको स्थिति कस्तो हुनेछ, त्यसैको आधारमा पार्टीले निर्णय लिनेछ।
हाल तृणमूल कंग्रेसले दार्जीलिङ पहाडमा पार्टी बिस्तारको कामलाई निकै प्राथमिकता दिन थालेको छ भने समष्टि कमिटी, बुथ कमिटीहरूको गठन पनि शुरू गरिसकेको छ। उनले भने-पार्टीले मलाई दार्जीलिङ पहाडमा पार्टीसँगै अन्य समस्याहरू हेर्नको लागि नै पार्टीका पर्यवेक्षक बनाएको छ। यसैले पहाडका विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण गरेर समस्या बुझ्नेछु अनि पार्टी हाई कमाण्डकहाँ रिपोर्ट पेश गर्नेछु। ताकि दार्जीलिङ पहाडमा रहेका प्रत्येक समस्या राज्यकी मुख्यमन्त्रीसम्म पुगोस् अनि समाधानको ठोस पहल हुन सकोस्। यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर नै तृणमूल कंग्रेस नेत्री ममता व्यानर्जीले दिदी बलो डट कम नामको एउटा एप शुरू गरेकी छन्। जसको माध्यमबाट जनता आफैले दिदीसित सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। 1 महीनाअघि मात्रै शुरू गरिएको यो एपमार्फत हालसम्म दार्जीलिङ पहाडका 8 हजारभन्दा अधिक मानिसहरूले सोझै मुख्यमन्त्रीसित सम्पर्क गरिसकेको पनि उनले जनाए।
कन्याश्री दिवस पालन
खऱसाङमा सार्वजनिक भवनको शिलान्यास
चितुवाको छाला, खोपडीसँगै दुइ युवकको पक्राउ
डा. लक्खीदेवी सुन्दासको निधनमा शोकविह्वल बन्यो दार्जीलिङ